Natao fisavana manokana tao amin’ny tranombarotra serba goavana iray, niampanga ilay fivarotana ho mpanavakavaka ity Roma mpihira opera ity · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 11 Janoary 2019 7:52 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Ελληνικά, Français, 繁體中文, 简体中文, Italiano, русский, Yorùbá, 日本語, English
Nataša Tasić Knežević, sary avy amin'i Dzenet Koko, nahazoana alalana.
Tao amin'ny lahatsary navoaka tamin'ny 29 Desambra taorian'ny zavanitranga, nanazava Ramatoa kely Tasić Knežević fa rehefa nivoaka ny tranombarotra goavana Maxi niaraka tamin'ireo mpiantsena hafa izy, dia naneno ny famantarana mpangalatra. Raha navela hivoaka avokoa ny olon-drehetra, dia nilaza taminy ny mpiambina ny fivarotana mba hijanona ary nanomboka nisava azy teo imasom-bahoaka no sady nandrabiraby azy ireo mpijery. Taratasin-kira, boky sy valizy ihany no hitan'izy ireo tao anatin'ny kitapony.
Tamin'ny andro voalohany Janoary 2019, nanjavona tampoka niaraka tamin'ny mombamomba an'i Knežević tao amin'ilay Facebook ilay lahatsary. Na dia tsy nanazava ampahibemaso ny zava-nitranga aza izy, dia maro no nilaza fa izy ihany no nanaisotra izany mba hampihenana ny korontana. Tao anatin'ny andro vitsy monja, dia efa nisy nijery in-60.000 mahery ny lahatsariny, ary nisy nizara in-350 sy nahazo fanehoan-kevitra teo amin'ny 700. Ny vavahadim-baovao tsy miankina Buka no voalohany nitatitra ny zava-nitranga, ary narahan'ny media Balkana hafa.
Soprano ao amin'ny Serbian National Theatre, ao Novi Sad, tanàna faharoa lehibe indrindra ao amin'ny firenena Ramatoa kely Tasić Knežević. Niasa tao amin'ny trano fanaovana teathra Atelje 212 any Belgrade izy taloha. Mpihira lafika ihany koa izy ary mpihira tokana malaza ary matetika mihira amin'ny alalan'ny lovany Roma manokana izy.
Ao amin'ny lahatsary, nilaza i Knežević fa niala tsiny taminy ny mpitantana ny fivarotana rehefa avy nitaraina momba ny fanalam-baraka izy, saingy mbola nalahelo noho ny fanorisorenan'ny vahoaka nijery izy. Milaza izy fa nisy lehilahy zokiolona iray nitabataba hoe “tokony arian'izy ireo ity fako ity”, izay midika fa tokony noroahin'ny mpiasa tsy hiditra ny fivarotana izy, noho izy Roma.
“Fantatra izay tia mangalatra eto amin'ny manodidina eto!” no fehezan-teny avy amin'ny sarimihetsika hoe “Who's Singin’ Over There (Iza no mihira any)?” momba ny hetsika nitranga ny 5 aprily 1941. 77 taona taty aoriana, tsy niori-paka tamin'ny toe-tsainay izany [fitsarana an-tendrony fanavakavahana] izany. Holandey-belza ny orinasa [an'ny toeram-pivarotana Maxi] saingy ny vahoakanay no mpiasa ao! Mahamenatra! Fanohanana ilay vehivavy sady mpanakanto mahafinaritra @NatasaTasicKnez.
“Iza no mihira any?” dia sarimihetsika Yogoslavy tamin'ny taona 1980 izay nahatratra ny sata ankatoavin'ny rehetra azy tany Balkana. Ao amin'ny tantara, voampanga tamim-pahadisoana tamin'ny halatra ireo Roma roa mpiangaly mozika ary saika tsy tafavoaka velona tamin'ny fikasana hanaovana fitsaram-bahoaka azy ireo.
Namoaka fialan-tsiny ofisialy tamin'io andro io ihany ny orinasa reny tao amin'ny fivarotana lehibe Maxi, Delez Srbija. Nolazainy fa “matoky izy fa ho tranga iray miavaka noho ny fihetsika tsy mety nataon'ny olona iray [mpiasa] izany ary tsy hisy toe-javatra toy izany intsony amin'ny hoavy.” Nilaza koa ny orinasa fa hampiofana ireo mpiasany momba ny fitondran-tena sahaza atao rehefa misy ahiahy fisiana halatra.
Ny ampitson'io, niampanga ny zava-nitranga i Miloš Nikolić, talen'ny Birao fampiatiana ny Roma ao Novi Sad. Hoy izy: “mampiseho ny fikarohana misy fa ny lehilahy sy ny vehivavy Roma no vondrona tena iharan'ny fanavakavahana indrindra eto amin'ny firenentsika. Tsy maintsy miara-miasa isika mba hanova izany!”
Ny 31 Desambra, niampanga ny fitondrantenan'ny mpiasan'ny fivarotana lehibe Maxi ho “manafintohina sy azo melohina” ihany koa ny praiminisitra lefitra Serba sy ny filohan'ny sampana momba ny fitovian'ny lahy sy ny vavy, Zorana Mihajlović. Tsy nanambara fepetra mivaingana izy mba hiresahana ny olana goavana amin'ny fanavakavahana mihatra amin'ireo olona avy amin'ny taranaka Roma ao Serbia.
Raha toa nanala ny mombamomba azy tao amin'ny Facebook Ramatoa Knežević, izay azo antoka fa mba hialàna amin'ny korontana, dia nitazona ny pejiny Twitter kosa izy. Tamin'ny andro mialoha ny taom-baovao, namoaka hafatra fohy nanondro ny zava-nitranga izy.
Ry namana malala, nisy tranga mampalahelo nitranga andro vitsivitsy lasa izay, saingy manantena aho fa hivalona amin'ny 2018 ny toe-javatra toy izany ary tsy hitranga intsony ny toe-javatra tahaka izany. Aoka isika rehetra mba hanaja ny maha-olombelona, ​​izany no hany zavatra tsara eto amin'ity izao tontolo izao ity. <3